को-को बन्लान् कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद ? [हेर्नुहोस्, सम्भावित सूची] « रिपोर्टर्स नेपाल
को-को बन्लान् कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद ? [हेर्नुहोस्, सम्भावित सूची]
प्रकाशित मिति : 2018 February 12, 5:35 am
काठमाडौं २९ माघ ।
कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा सोमबार बुझाउने तयारी गरेका छन् । जितेका सिटमा समूह मिलाउने प्राविधिक तयारीले आइतबार बुझाउन नभ्याइएको ती दलले जनाएका छन् ।
समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ४०, माओवादीले १७, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले ६/६ सिट जितेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक रूपमा सूची टुंगो लागे पनि प्राविधिक ‘क्लस्टर’ मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘खालि प्राविधिक पक्ष मिलाएर बुझाउन बाँकी छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसमा गृहकार्य जारी छ ।’ समानुपातिक सूचीको ‘क्लस्टर’मिलाउन कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार बिहान डाकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी कांग्रेसको कुल ७६ सांसद हुनेछन् । जसको ३३ प्रतिशत अर्थात् २६ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभामा ६ जना महिला निर्वाचित भएकाले कांग्रेसले अब प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ २० जना महिला पठाए पुग्छ ।
महिला कोटामा कांग्रेसले खस/आर्यबाट ६, दलित ३, आदिवासी जनजाति ६, मधेसी ३, थारू १ र मुस्लिम समुदायबाट १ महिला सहभागी गराउनुपर्ने छ । कांग्रेसको प्रत्यक्षमा २३ जना मात्रै निर्वाचत भएका कारण समानुपातिकमा २० जना पुरुष जान पाउने भएका छन् । जसमा खस/आर्य ६, आदिवासी जनजाति ५, दलित ३, मधेसी ३, मुस्लिम १, थारू १ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनायो ।
मधेसी महिलाबाट मीनाक्षी झा लगातार तेस्रो पटक समानुपातिकमा पर्ने सम्भावना छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले अपवादबाहेक एक पटक समानुपातिक सुविधा लिइसकेकालाई नदोहोर्‍याउने भने पनि उनलाई ल्याउन कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको दबाब छ । कांग्रेसमा एक पटक समानुपातिक सुविधा लिइसकेका एक दर्जन बढी यस पटक पनि दोहोरिएका छन् ।
कांग्रेसको सम्भावित सूची